အမေရိကန်သမိုင်းတွင်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မြင့်မားသည်။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » အမေရိကန်သမိုင်း high-definition တွေ့ဆုံ!
အမေရိကန်သမိုင်း high-definition တွေ့ဆုံ!
အဆိုပါ ကိုလိုနီခေတ် Williamsburg ဖောင်ဒေးရှင်း အဆိုပါသူဟာ Emmy Award ဆုကိုဆွတ်ခူးလက်မှတ်စီးရီး "အိမ်" "အီလက်ထရောနစ်ဖျော်ဖြေမှုခရီးများထွက်ခြင်း" (EFT) ၏ဝယ်ယူန်းကျင်ကသူတို့စတူဒီယိုစစ်ဆင်ရေးအဆင့်မြှင့်ထားပါတယ် Panasonic က AK-HC3800 HD စတူဒီယိုကင်မရာများကို! အဆိုပါခြုံငုံ HD ပေးအဆင့်မြှင့်အဆိုပါကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလူနေမှုသမိုင်းပြတိုက်အဘို့ခွင့်ပြုနိုင်စွမ်း HD PBS ဘူတာနှင့်တိုင်းပြည်အနှံ့ Cable ကိုလိုင်းများပေါ်တွင်ပေးပို့!
လာမည့် 2014-2015 ကျောင်းကတစ်နှစ်အတွင်း VariCams နှင့် HC3800s, ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့အီလက်ထရောနစ်ဖျော်ဖြေမှုခရီးများထွက်ခြင်း (EFT) အတွက် Pre-ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်အပေါ်အများပြည်သူအသံလွှင့်စခန်းများနှင့်အတူပါဝင်အားဖြင့်အဋ္ဌမတနျးရဲ့မှတဆင့်စတုတ္ထပစ်မှတ်ထားထားတဲ့ program တစ်ခုတက်ရှိနေသေးသည်မည်, ပညာရေးနှင့် ကေဘယ်လိုင်းများကို။ အဆိုပါ EFT အစီအစဉ်ကိုကိုလိုနီ Williamsburg, VA သို့၏ကြွယ်ဝသောအမေရိကန်သမိုင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့ကမ္ဘာတဝှမ်းစာသင်ခန်းများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ EFT ထုတ်လွှင့်အချိန်ဇယားကိုဧပြီလ 2014 မှတဆင့်အောက်တိုဘာလ 2014 တင်ဆက်ခုနစျပါးတစျနာရီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအစီအစဉ်များ (သင့်ဒေသခံစာရင်းများ Check!) ပါရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကြည့်ရှုကိုလည်းအခမဲ့အွန်လိုင်း streaming များမှတဆင့်စောင့်ကြည့်နိုင်သည်!
အီလက်ထရောနစ်ဖျော်ဖြေမှုခရီးများထွက်ကျောင်းသားများကိုသူတို့သွားရောက်ကြည့်ရှုမယ့်အခွင့်အလမ်းရဖို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်သည်အမျိုးသားဥယျာဉ်မှတဆင့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ခေါင်းစဉ်အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းပေးပါ။ အမျိုးသားဥယျာဉ်ဝန်ဆောင်မှု Rangers နှင့်လူငယ်များကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်နှင့်ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားအပြန်အလှန်ဂိမ်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များကို featuring website တစ်ခု featuring အမျိုးသားရေးပန်းခြံထဲကနေတစ်ဦးကရုပ်မြင်သံကြားကနေထုတ်လွှင့်: တစ်ခုချင်းစီ EFT နှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ အဆိုပါထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် website ကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြည့်စွတ်သုံးကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကြွယ်ဝပုံရိပ်နဲ့ content တွေနဲ့သင်ပေး။ အီလက်ထရောနစ်ဖျော်ဖြေမှုခရီးများထွက်ခြင်းအဘို့အ created the ကျယ်ပြန့်သမိုင်းသယံဇာတကြေးပေးသွင်းခြင်းဖြင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံး, On-demand ယခုရရှိနိုင်ပါ HERO သည်သမိုင်းပညာရေးအရင်းအမြစ်များအွန်လိုင်း မာလ်တီမီဒီယာ ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားစာကြည့်တိုက်နှင့် e-သင်ယူခြင်းပတ်ဝန်းကျင်။ အပြန်အလှန်အဘို့အပိုဆောင်းအခွင့်အလမ်းများလည်း HERO စာရင်းသွင်းသူရရှိနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်.
Productions ဘီလ် Wagner ၏ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဒါရိုက်တာအဆိုပါ HC3800s ဒီစက်တင်ဘာလအစအနည်းဆုံးငါးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ webcasts, ထုတ်လုပ်ရန်အဖြစ်ကဗီဒီယိုပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကျယ်ပြန်ပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုထောကျပံ့ဖို့အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။
"ဒီတစ်နှစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ EFT အစီအစဉ်ကိုအပြည့်အဝပါလိမ့်မည် HD, ထို HC3800s ဆက်ဆက်ကြောင်းအကူးအပြောင်းတစ်ခု linchpin နေကြတယ် "ဟု Wagner ကဆိုသည်။ "ဟုအဆိုပါ VariCams နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏သာလွန်အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပြီး, ကျွန်တော်တစ်ဦး Panasonic ကစတူဒီယိုကင်မရာစဉ်းစားရန်စွန့်ပစ်ခဲ့ကြ, ငါတို့သည် HPX3800 ၏ရန်ဒါအလားတူဖြစ်သော, အ HC3700 ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုစျေးနှုန်းနှင့်ထိပ်တန်းအရောင်ကိုင်တွယ်ရောင်းချခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ HC3800s နှင့်အတူပဏာမအလုပ်လုပ်နေခဲ့ချက်ချင်းကင်မရာရဲ့အရောင် space ၏အတိမ်အနက်ကိုတန်ဖိုးထားနိုင်ပါ။ နှင့်၎င်း၏ F11 sensitivity ကိုနှင့်အတူကျနော်တို့စတူဒီယိုအတွက်လျော့နည်း illumination လိုအပ်ပါတယ် "ဟုသူကဆက်ပြောသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတူဒီယို output ကိုမရောက်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ VariCam လယ်ပြင်အလုပ်တူဘယ်တော့မှထားပါတယ်, ဒါပေမယ့် HC3800 ရဲ့တိကျ 16-bit မှာ image processing တွင်အတူကျွန်တော်သဘောပေါက်နေကြတယ်။ "
Wagner လေးပါး HC3800s အတူဖောင်ဒေးရှင်းကိုလည်းနှစ်ခုရှိသည်သောလေး AK-HCU200 CCU ယူနစ်, ဝယ်ယူပြောသည် HD/ SD က-SDI output ကိုလမ်းကြောင်းများနှင့်အပိုဆောင်းနှစ်ခု HDပုံမော်နီတာတနေရာနှင့် တွဲဖက်. များတွင်အသုံးပြုနိုင် / SD က-SDI output ကိုလမ်းကြောင်းများ။ မှတ်စု: အဆိုပါ AK-HC3800 သုံးခုက high-sensitivity ကို, အရည်အသွေးမြင့်2/ 3-type အမျိုးအစား 2.2-megapixel ကင်မရာ CCDs တစ်ဦးက high-တိကျစွာ 16 နည်းနည်း A / D ကို image processing တွင်ဆားကစ်များနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်မျိုးဆက် 38-bit မှာတပ်ဆင်ထားကာမြင့်မားသောအဓိပ်ပါယျစတူဒီယိုကင်မရာဖြစ်ပါတယ် ဒစ်ဂျစ်တယ် signal processor (DSP) ။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်သာ 8 ပေါင်မှာပေါ့ပါးသောကြောင့် chromatic ထစ်အငေါ့လျော်ကြေးငွေ (CAC), မြင်ကွင်းတစ်ခုဖိုင်အပြင်အဆင်များ, နှင့် Panasonic ရဲ့သီးသန့် dynamic range ကိုလမ်းပိုင်း (DRs) ၏ခေတ်မီအကောင်အထည်ဖော်မှုပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ HC3800 11Hz မှာ F59.94 ၏မြင့်မားသော sensitivity ကို (2,000 LX) နှင့် 60dB တစ်ဦးက S / N ကိုအချိုးခံနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ 16-bit မှာ A / D နှင့် 38-bit မှာ DSP Spatial အသုံးချနည်းပညာအော့ဖ်ဆက်နှင့်လျော့နည်းmoirÃ©နှင့် -1,100dB ထက်လျော့နည်းနေတဲ့ဒေါင်လိုက် smear အဆင့်နှင့်အတူတစ်ဦး high resolution ကတော့ရုပ်ပုံ (130 လိုင်းများ) ပေးကာအဆင့်မြင့်တစ်ခုတည်းလွှဲပြောင်းစနစ်။
2010 ကတည်းကအဆိုပါကိုလိုနီ Williamsburg ဖောင်ဒေးရှင်းထုတ်လွှင့်စတူဒီယိုထဲမှာ Single-ကင်မရာအင်တာဗျူးတွေကနေ EFTs များအတွက်ပစ်ခတ်သောပီပီ scripted, သမိုင်းဝင်များမှာပြန်လည်သရုပ်ဖော်ပုံများအထိ, အ HPX3700 VariCams နှင့်အတူလယ်ပြင်ရာပေါင်းများစွာနှင့်စတူဒီယိုတာဝန်တွေပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့ HPX3700 ရဲ့ပုံရိပ်ကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်အနိမ့်အလင်းကိုင်တွယ်ကိုချစ်," Wagner ကဆိုသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့လယ်ပြင်တာဝန်ကျကျယ်ပြန့်အထိဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်တော်တုတ်ပေါ် VariCams အသုံးပြုနို့တိုက်တရိစ္ဆာန်, jibs နှင့်မကြာခဏလက်ကိုင် shoot ။ ကျနော်တို့ P2 လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အတူအလွန်အဆင်ပြေပါတယ်။ "ဒီ HPX3700s နှင့်အတူ outfitted နေကြတယ် ကို Canon zoom မှန်ဘီလူးများ, Wagner 100 / 1080p အတွက် AVC-အချင်းချင်းအပြန်အလှန် 30 ရိုက်, နှင့်တည်းဖြတ်မှုပေါင်း HD on လွန်စွာလိုလားသော ဆငျဖိုနီ။
"ယခုအချိန်အထိကျနော်တို့ all- ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်HD လယ်ပြင်၌, ဒါပေမယ့် SD ကပေးပို့မယ့်အတူ "ဟုသူကမှတ်ချက်ချသည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတူဒီယိုနှင့်ထရပ်ကားနှင့်အတူ HD အဆင့်မြှင့်, ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖြစ်လိမ့်မယ် HD, ဒီလာမယ့်နှစ်တွင် EFTs ၏ထုတ်လွှင့်အပါအဝငျ။ ကျနော်တို့ကင်မရာ၏ Panasonic ကမိသားစုနှင့်အတူနေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူပျော်ရွှင်ပါတယ်။ "
အဆိုပါကိုလိုနီ Williamsburg ဖောင်ဒေးရှင်း, အလည်အပတ်ခရီးအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက www.cwf.org.
စီးပွားရေးအဘို့အ Panasonic က Solutions: Panasonic ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည် '' Customer များအတွက်ပိုကောင်းoutcomesâ€ "မောင်းထုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများနှင့်အတူဒေတာချိတ်ဆက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနည်းပညာဖြေရှင်းချက်ကယ်တင်တတ်၏။ Panasonic ကအင်ဂျင်နီယာများအားလုံးအမျိုးအစားများဒေတာ, ဖန်တီးဖမ်းယူကယ်နှုတ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်ကုန်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ, ဘယ်မှာအခါနှင့်ဘယ်လိုလိုအပ်ပါသည်။ အားလုံးအရွယ်အစား၏အစိုးရနှင့်စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းတွေများအတွက် Panasonic ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြေရှင်းချက်၏ပြီးပြည့်စုံသော suite ကိုစုစည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်သွယ်ရေး, မိုဘိုင်းကွန်ပျူတာ, လုံခြုံရေးနှင့်စောင့်ကြည့်အမှာစကား, လက်လီ Point-of-Sale, ရုံးကုန်ထုတ်စွမ်းအား, အမြင်အာရုံဆက်သွယ်ရေး (ပရိုဂျက်, display တွေ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်) နှင့် HD ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှု။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Panasonic ကဖြေရှင်းချက်မြောက်အမေရိက၏ Panasonic က System ကိုဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီအားဖြင့်ကယ်လွှတ်နေကြတယ်, မြောက်အမေရိက၏ Panasonic ကကော်ပိုရေးရှင်း, Panasonic က Corporation.All အမှတ်တံဆိပ်၏ကျောင်းအုပ်ကြီးမြောက်အမေရိကလက်အောက်ခံနှင့်ကုမ္ပဏီ / ကုန်ပစ္စည်းအမည်တပ်မအမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေရဲ့မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ အားလုံးသတ်မှတ်ချက်များအသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Panasonic ကဖြေရှင်းချက်အပေါ်ပြန်ကြားရေးခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်ရရှိသောနိုင်ပါသည် 877-803-8492 သို့မဟုတ်မှာ us.panasonic.com/business-solutions.
အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ မျက်ကပ်မှန် 2014-06-25
ယခင်: နောက်ကွယ်မှာ-the-ပြကွက်များကမ္ဘာ့ဖလား: TVUPack & အသံလွှင့် Beat!
နောက်တစ်ခု: ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်မှများအတွက် Facilis TerraBlock အလယ်ပိုင်း Post ကိုထုတ်လုပ်မှု